Kober - Wikipedia
Koberta saafiga ah waa jileec midabkeeduna waa oranji, waxaanay aad ugu fiican tahay gudbinta korontoda iyo kulka taaso oo loo isticmaalo dhismayaasha iyo warshadaha.
Kober (Ingiriis: Copper) calaamad (Cu) waa curiye kimiko ah oo tiroda atomkiisu tahay labaatan-iyo-sagaal (29). Koberta saafiga ah waa jileec midabkeeduna waa oranji, waxaanay aad ugu fiican tahay gudbinta korontoda iyo kulka taaso oo loo isticmaalo dhismayaasha iyo warshadaha. Kobertu waa bir ka tirsan Transitional Metalska ee guruubka 11aad ee Diwaanka Curiye. Sidoo kale birtani waxay ka mid tahay guruubka d-block ayadoo leh miisaan atom 63.546.
Birta Koberta iyo jaandiga ay ka midka tahay waxaa aadamuhu soo isticmaalayeen wakhti aad u dheer, waxaa la sheegaa in wakhtigii boqortooyadii Roomaanka loo isticmaali jirey naxaasta qurxin iyo in lagu dhahaadho sheeyo kale.
Dhinaca kale, Kobertu waa macdan muhiim u ah nooleha ayadoo qeyb ka geeysata Hab Neefsiga noolaha. Sidoo kale, koberta oo ku dhafan curiyekale ayaa laga helaa beerka, sambabada iyo lafaha bani Ademka.
Isku dhiska curiyehan waxaa loo isticmaalaa in laga sameeyo sunta bakteriyada, sunta Xasharaadka xamagta alwaaxyada.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Kober&oldid=206521"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 16 Oktoobar 2020, marka ee eheed 17:35.